Barre's soldiers keeps giving up on him. - SomaliNet Forums
Barre's soldiers keeps giving up on him.
Postby MarsinQorahay » Tue Apr 29, 2014 4:39 pm
Wararka Dhanaan Media si hoose u heshay ayaa sheegaya in balantu ay ahayd in maanta ciidamo kontameeya ah ay soo xaroodaan iyadoo ay jirtay odayaal loo diray Goobweyn si usoo galbiyaan ciidamada soo xaroonaya.
Waxaan xog ku helnay in Bare Hiiraale iyo ciidamo la fikir ah ay rasaas ku fureen doomihii soo gudbinayay ciidanka iyadoo sida lagu soo warmayaa ay halkaas ka dhacday kala fakasho waxaana iyagoo nabad ah maanta Kismaayo soo gaadhay 17 askari oo hubkoodi wata kuwaas intii hubkii lag dhigay lagu xareeyay Jaamacada Kismaayo oo ah halka lagu aruurinayo ciidamada Goobweyn kasoo xaroonaya.
Sidoo kale waxaan xog ku helnay in shalay ay magaalada soo gaadheen ciidamo tiradooda lagu sheegay 14 kuwaas oo qaarkood hub watay qaarna ay waranle ahaayeen.
Isku soo duuboo Bare Hiiraale ayaa ku adkaystay go’aankii idaacadaha ka sheegay ee ahaa inuusan diyaar u ahayn nabada loogu baaqay.
Gudigii afar geesoodka ahaa ee uxilsaarnaa arinta soo xaraynta ciidmada ku sugan duleedka Kismaayo ayaa la filayaa in goor dhow ay kulmaan kana soo saraan go’aan mowqifka uu qaatay Bare Hiiraale.
Isugayn ciidamada soo xarooday ayaa tiradoodu dhantahay 93 askari kuwaas hada lagu hayo Jaamacada Kismaayo.
http://www.dhanaanmedia.com/2014/04/qaa ... -xarooday/
Dedaal dheer oo uu bixiyay Raysulwasaare Cabdiweli iyo maamulka Jubaland ayaa waxaa galabnimadii manata suura gashay in lasoo xareeyo qeyb kamid ah ciidamadii uu khalday Bare Hiiraale oo tan iyo markii Kismaayo laga saaray ku sugnaa tuulada Goobweyn.Ciidamada maanta soo xarooday ayaa la geeyay Jaamacada Kismaayo halkaas oo dhaqan celin loogu sameyn ka hor inta aan lagu biirinin ciidanka maamulka Jubaland.
Dhanka kale waxay arintan u cuntami weyday Bare Hiiraale oo lagu wargeliyay in ciidamada la jooga uu soo xareeya isaguna udiyaar garoobo sidii loogu qaadi lahaa magaalada Muqdisho.
Ciidamada Jaamacada Kismaayo lagu xareeyay ayaa tiradooda warar kala duwan kasoo baxaysaa,wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in tiradoodu tahay 17, 16 rag ah iyo hal dumar ah.Hoos ka daawo sawirada ciidankii maanta soo xarooday.
http://www.dhanaanmedia.com/2014/04/daa ... -kismaayo/
by Lancer » Wed Dec 24, 2014 1:25 pm » in Politics - General Discussions
BREAKING NEWS 30 TFG soldiers captured 25 soldiers dead
by Hiiraan boy » Wed Mar 21, 2007 8:45 am » in General - General Discussions
SSC SOLDIERS KILL IIDOOR SOLDIERS IN OOG SOOL
by HELWAA » Wed Sep 29, 2010 5:12 am » in Politics - Somaliland